South Africa Inoti Sarudzo Gore Rino Hadzikwanisike Kuitwa
Chimwe chizvipangamazano zvemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, chazivisa neChipiri kuti mangange ari muZimbabwe panyaya dzezvematongerwo enyika haafanire kuramba aripo sezvo nyika iri kuramba ichitambura.
Muzvare Lindiwe Zulu, avo vanobatsira VaZuma munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, vanotiwo sarudzo dzemuZimbabwe hadzikwanise kuti dziitwe gore rino nekuti pachine zvakawanda zvinoda kuti zviitwe.
South Africa ndiyo mutongi gava akadomwa neSADC pakugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe.
Vachitaura pagungano rekuzeya remangwana reZimbabwe muPretoria, Muzvare Zulu vati vari kuyedza kuumba hwaro hwakanaka hwesarudzo kuitira kuti pasawane anozonyunyuta mushure mesarudzo.
Vati vari kutungamira mapato matatu munhaurirano vari kutenderana kuti panoda nguva yakakwana yekuti vaite zvinodiwa pasati paitwa sarudzo.
Asi muZanu-PF munonzi mune chimoto sezvo vamwe vachitungamirwa nemauto ari pasi pesangano reJoint Operation Command, vari kuti VaPatrick Chinamasa naVaNicholas Goche, vari kurasika pakubvumirana neMDC mbiri kuti sarudzo dzisaitwe gore rino. VaChinamasa vakatomboti sarudzo dzingangoitwe chete muna 2013 nekuti pari zvino zvinhu hazvisati zvagadziriswa.
Asi mutauriri webato iri, VaRugare Gumbo, vanoti idzi ipfungwa dzaVaChinamasa kwete dzebato. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, avo vanoona nezvekufambiswa kwezvematongerwo enyika muZanu-PF, vanotiwo havasi kuda kutambira nyaya yekuvandudzwa kwezvekutorwa kwenhau sezviri kubuda munhaurirano.
Nhumwa dzaVaZuma dziri kutarisirwa kupinda munyika svondo rino kuti dzizeye nyaya dziri kuda kuti dzigadziriswe uye kunyorerana pasi nyaya dzakatenderanwa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti izvi zvinosanganisira nyaya yekuvandudzwa kwemashandiro emauto, mapurisa nevasori.
VeMDC vanoti vari kuda kuti vasori vave pasi pemutemo wedare reparamende. Pari kudiwa kuti mapazi ezvekudzivirirwa kwenyika aya asavhiringidze mabasa eJOMIC pamwe neebazi rinoona nezvekupodza mavanga nekuregererana.
Pari kudiwa zvakare kuti JOMIC ipihwe meno ishande kuti ikwanise kunyatsoongorora mhirizhonga munyika. Dzimwe nyaya dzinoda kupedziswa nekunyoreranwa pasi inyaya dzekuvandudza zvinhu munyaya dzenhau.
Nhumwa dzaVaZuma dziri kutarisirwa kuita hurukuro nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vaone kuti vovandudza sei zvinhu munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reAfrica Reform Institute, VaTrevor Maisiri, vanoti mashoko ekumisa sarudzo akakosha nekuti nyika haina kugadzirira.